उपकुलपति र जिष्टारको लफडाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी
विराटनगर, १८ असार । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. महेश्वरमान श्रेष्ठले रजिष्टार डा. निरोज पाण्डेलाई पदबाट हटाउन स्पष्टिकरण सोधेपछि केही विद्यार्थी संगठनको सहयोगमा विश्वविद्यालयमा बिहिवार तालाबन्दी भएको छ । एमाओवादी र
झापाका विद्यालयमा ६ करोड खर्च
झापा १८ असार । जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाले यस वर्ष विद्यालयको भौतिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत ५ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी
मस्यौदामा आधारभूत निःशुल्ककोजिम्मेवारी प्रदेश की केन्द्रको
काठमाडौं, १८ असार । नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरिनुले शिक्षाकर्मी उत्साहित भएपनि
शिक्षा कार्यालयको सात करोड बढी बेरुजु
प्रयास लिम्बू ताप्लेजुङ, १६ असार । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ताप्लेजुङको बेरुजु सात करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्मको बेरुजु रकम सात करोड छ
अख्तिायारको डरले त्रिविवि मर्कचारी र प्राध्यापकले सुबिदा फिर्ता गरे
काठमाडौं, १५ असार । नेपाल प्राध्यापक सङ्घले काज बिदा स्वीकृत गराई विभिन्न गोष्ठीमा भाग लिएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले प्राप्त गरेको दैनिक भत्ता फिर्ताका लागि त्रिविले दबाब दिएको भन्दै सो कार्य
खोटाङमा अझै पुस्तक अभाव
खोटाङ, १५ असार । शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना वितिसक्दा समेत खोटाङमा पर्याप्त मात्रामा पाठ्यपुस्तक आइपुगेको छैन । वैशाखको सुरुमै आइपुग्नुपर्ने पुस्तक जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रको ढिलासुस्तीका कारण हालसम्म आइपुग्न
डिनलाई शौचालयमा थुनेपछि…
पोखरा, १४ असार । अनेरास्ववियुले पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन डा। गोविन्द प्रसाद लामिछानेलाई विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको शौचालयमा थुनेका छन् । सोमबार दिउँसो अनेरास्ववियु समर्थित कार्यकर्ताहरुले केन्द्रीय कार्यालयमा
बल बिकास केन्द्रलाई बिद्यालयमा गाभ्न माग
झापा,१४ असार । मेची र कोशीका बाल बिकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता आफ्ना ६ बुँदे माग पुरा गर्न आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् । सहयोगी कार्यकर्ताले मेची कोशी संघर्ष समिति निर्माण गरी आन्दोनल
प्राविधिक एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक
भक्तपुर, १३ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले २०७१ सालको प्राविधिकतर्फको एसएलसी परीक्षाको नतिजा आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये १५० जना छात्र
सुदूरका सत्ताइस विद्यालयको नतिजा शुन्य
कञ्चनपुर, १३ असार । एसएलसी परीक्षाको नतिजामा सुदूरपश्चिमका छ जिल्लाका २७ विद्यालयले शुन्य नतिजा ल्याएका छन् । डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, बाजुरा र बझाङका गरी २७ विद्यालयको नतिजा शुन्य रहेको